Romantique Deluxe #6 - 16th Century Mill - Ihotele - I-Airbnb
Romantique Deluxe #6 - 16th Century Mill - Ihotele
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguCédric
Ifakwe kumbindi wepaki enemithi eselunxwemeni lomlambo iCharentonne, iLe Moulin Fouret sisakhiwo senkulungwane ye-16 esalungiswa ngokupheleleyo, sajikwa yaba yiBoutique Hotel*** kunye nendawo yokutyela. Yenziwe ngamagumbi ama-6 ajonge ipaki, yindawo yoxolo, imizuzu emi-5 ukusuka edolophini yaseBernay.
I-Romantic Deluxe yindlu enkulu yokulala eyi-30 sqm enegumbi lokuhlambela leen-suite, elinebhafu, isinki enkulu, isiporo esifudumalayo setawuli kunye neshawari yokuhamba yase-italy. Ifestile ephindwe kabini ejonge uhlaza. Indlu yangasese eyahlukileyo.
Igumbi lokulala lifakwe ngokupheleleyo ibhedi enkulu (180cm), indawo yokulala esemgangathweni, iTV yentambo kunye ne-Intanethi, kunye nendawo yokuphumla ene-armchair kunye netafile yekofu. Ifestile ekhazimliswe kabini, jonga epakini.
Iketile iyafumaneka kwigumbi (iti kunye nekofu zibandakanyiwe).
Inkonzo yokucoca yemihla ngemihla iyanikezelwa, ilinen yebhedi kunye neetawuli zitshintshwa xa kuceliwe.
Iindwendwe zethu ziya kuba nokufikelela ngokupheleleyo kwi-2,5 yeehektare ezinamaplanga kunye nepaki yeentyatyambo okomzuzwana ozolileyo ngasemlanjeni. Amadada elitye lokusila, ifama kunye negadi yemifuno yompheki ayabonakala.
Indawo yokutyela yehotele, ivula yonke imihla, ibonelela ngokutya kwale mihla kunye nomgangatho (BIB Gourmand 2020 ukusuka kwiSikhokelo saseMichelin) esilungiswe nguChef Cedric Auger. Imenyu yamaxesha onyaka, iimveliso ezintsha nezifumaneka ekuhlaleni.
Inkonzo yasekuseni iyafumaneka (intlawulo eyongezelelweyo), kwigumbi lakho okanye kwindawo yokutyela. Yenziwe kwiimveliso ezitsha kunye nezasekhaya (ngaphandle kweepastries), kumgaqo-siseko we-zero-waste.
Iindawo ezininzi zenkcubeko nezembali zokutyelela ziya kugqiba ukuhlala kwakho, njenge-Abbey yaseBernay, i-Basilica yase-Notre Dame de la Couture, i-domain ephakathi kwe-Harcourt, i-Château du Blanc Buisson, iMyuziyam yoBugcisa obuLungileyo baseBernay ...
Fumanisa nelali entle yase-Bec Hellouin (ebhalwe "yeyona lali intle eFransi"), indlu yeemonki kunye nefama yayo ye-permaculture/organic.
Ungakonwabela nokuba kufutshane kolwandle ngokundwendwela unxweme lwaseNormandy olukwi 70km kude (Deauvilles, Trouvilles, Honfleur...).
Abamkeli zindwendwe uCedric & Maxime baya kufumaneka kuzo zonke izicelo zakho, kwaye baya kwenza konke okusemandleni abo ukuqinisekisa ukuba unokuhlala kamnandi.
Inombolo yomthetho: 834248288 R.C.S. Bernay
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Treis-Sants-en-Ouche